musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Chii Chinoitika mu Vegas chinofanirwa kuve chakavanzika
Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Dunhu reSouthern Nevada Hutano riri kukurudzira munhu wese kupfeka mamask zvakare mukati meimba uye munzvimbo dzakazara vanhu chero vakabayiwa kana kwete uye kana vakaedza vasina kana kwete.
Huwandu hwezviitiko zveCOVID-19 zviri kukwira muLas Vegas, Nevada, sezvazviri kuitika kunzvimbo zhinji munyika uye kutenderera pasirese.
Ichi hachisi chinhu chepamutemo chinodiwa, sezvo chete matunhu enharaunda nemaguta anogona kuraira izvo.
Kurudziro yemask yakauya mushure mekunge vakuru vehutano vakazivisa nezuro 938 mamiriro matsva nyika - rakakura zuva rimwe kusvetuka kubva munaKukadzi - uye gumi nevashanu vakafa.
Uku kurudziro yakasimba inokanganisa macasino, makonati, uye makirabhu uko bhizinesi rawedzera kubvira zvirambidzo zvabviswa uye nyika yakadzorera zvizere denda matanho ekudzora kumatunhu anenge masvondo manomwe apfuura.
"Vese vakabaiwa uye vasina kubayiwa nhomba vanofanira kupfeka masiki pavanenge vari munzvimbo dzakazara vanhu… senge muzvitoro, zvitoro, zviitiko zvikuru nemakasino," Dr. Fermin Leguen, mukuru wezvehutano munzvimbo iyi, akaudza vatori venhau. Makiriniki ekudzivirira uye kuyedza kuri kuenderera mberi kunzvimbo dzinotenderera dunhu iri, Leguen akawedzera.
Mitero yekudzivirira yakamira mumavhiki apfuura muNevada, nyika ine libertarian leanings uko vakuru vehutano vakazivisa neChishanu kuti vangangoita 55 muzana yevagari vane makore gumi nemaviri zvichikwira vakagamuchira dosi imwechete Mushonga unobetsera kudzivirira covid-19. Pasi rese, vangangoita 46.3 muzana vakabaiwa zvakakwana. Munyika, makumi matanhatu neshanu kubva muzana yevakuru vakagashira kana imwe chete dziviriro, sekureva kweCenters for Disease Control and Prevention.
Mumwe mukuru ane mubatanidzwa anomiririra vashandi zviuru makumi matanhatu zveNevada kasino akaburitsa chirevo achiona njodzi dzinounzwa kuvashandi nevanhu vasina kubayiwa nhomba. Culinary Union mukuru wehurumende Geoconda Argüello-Kline akanongedzera kuCDC data kuti vanodarika 60,000 muzana yevanhu vakabatwa muchipatara nguva pfupi yadarika neCOVID-97 havana kuwana mushonga.